I-FAQ - I-AOLGA INDUSTRY LIMITED
Q1.Ingabe uyimboni noma umthengisi?
A.Singabakhi abaneshabhu yokucobelelana ngolwazi yensimbi nomjovo ngokuhlanganisa i-R&D, ukukhiqiza nokudayisa futhi singahlinzeka ngesevisi ye-OEM ne-ODM.
Q2.Ithini i-MOQ yakho?
A.Kuncike kumodeli, ngoba ezinye izinto azinayo imfuneko ye-MOQ kuyilapho ezinye izinhlobo zingama-500pcs, 1000pcs kanye no-2000pcs ngokulandelana kwazo.Sicela uzizwe ukhululekile ukusithinta ngeinfo@aolga.hkukwazi imininingwane eyengeziwe.
Q3.Ngingalithola kanjani ishidi lakho lokucaphuna?
A.Ungasitshela ezinye zezidingo zakho nge-imeyili, sizobe sesikuphendula ikhotheshini ngokushesha.
Q4.Sithini isikhathi sokulethwa?
A. Isikhathi sokulethwa sihlukile kusampula ne-oda lenqwaba.Ngokuvamile, kuzothatha usuku olu-1 kuye kweziyi-7 kumasampula kanye nezinsuku ezingama-35 ukuze uthole i-oda lenqwaba.Kodwa kukho konke, isikhathi sokuhola esinembile kufanele sincike esikhathini sokukhiqiza kanye nenani le-oda.
Q5.Ngingakwazi ukwenza imibala ezingxenyeni zepulasitiki, ezinjengobomvu, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka?
Q6.Singathanda ukuphrinta ilogo yethu ezintweni zikagesi.Ungakwazi yini ukuphumelela?
A. Sihlinzeka ngesevisi ye-OEM ehlanganisa ukuphrinta kwelogo, ukuklanywa kwebhokisi lesipho, ukuklanywa kwamabhokisi kanye nencwadi yeziqondiso, kodwa imfuneko ye-MOQ ihlukile.Sicela usithinte nge-imeyili ukuze uthole imininingwane.
Q7.Yisikhathi esingakanani iwaranti yomkhiqizo wakho?
Iminyaka engu-A.2. Siyaqiniseka kakhulu ngemikhiqizo yethu, futhi siyipakisha kahle kakhulu, ngakho ngokuvamile uzothola i-oda lakho lisesimweni esihle.
Q8.Ithini intengo yakho engcono kakhulu yalo mkhiqizo?
A.Intengo iyaxoxisana.Kuncike enanini, kodwa ngokuvamile sinesistimu yentengo ehlanganisiwe ehlanganisa intengo yokusabalalisa kanye nentengo yokudayisa.
Q9.Ungakwazi ukunginika amasampula?
A.Yebo, kunjalo!Unga-oda isampula elilodwa ukuze uhlole ikhwalithi.
Q10.Hlobo luni lwesitifiketi imikhiqizo yakho eye yaphasa?